Esigabeni somuntu wesitayela, ngaphandle kwezingubo ezihlukile, kunesisindo esikhulu sezesekeli ezifashisayo. Lokhu kufaka amabhande, izibopho, izikhwama, izigqoko, ama-crystal, izambulela, amasheya nezinye izinto ezikwazi ukubika ngesimo somnikazi wayo kanye nesimo sakhe emphakathini. Ama-cufflink abuye abe esesigaba sezesekeli ezibonisa ukuhlonishwa nokuqina kwamadoda. Njengamanje, amalungu amaningi e-sex aqinile akhetha isitayela se-classic ekugqoka. Ngaphezu kwalokho, bagqoka izibopho zebhizinisi hhayi kuphela ehhovisi, ngokusho kwekhodi yokugqoka, kodwa futhi ngokuzijabulisa bawasebenzisa ekuphileni kwansuku zonke. Ihembe lesitayela, ijajethi efanelwe kahle, ibhulukwe elifanako - konke lokhu kungenza umuntu wanamuhla akwazi ukuphikisana. Kodwa kunoma yikuphi, izesekeli zingakwazi ukuzihlobisa, futhi zichithe ngokuphelele umbono okhona.
Ekukhanyeni kwakho konke okushiwo ngenhla, kucacile ukuthi umbuzo wokuthi ungathinta kanjani ukugqoka, kufanele ukhathazeke ngempela labo bantu abathi bangesihloko "sesithonjana sesitayela." Imininingwane encane ye-wardrobe yommeleli wezocansi onamandla ayilula njengoba kubonakala ekuqaleni. Okumnandi, okuhle kakhulu, ama-cufflink aphezulu kufanele abe esitokisini senoma yimuphi umuntu othanda ihembe ukuya ezenzweni zezemidlalo.
Ukugqoka kanjani i-cufflinks? Umbuzo, of course, uyathakazelisa. Emva kwakho konke, bona, naphezu kokusayizi kwabo okulinganiselwe, bahlale bebona amehlo wonke umuntu. Indoda enesidingo esinjalo ngeke nakanjani ivele kwabanye. Futhi, nokho, abaningi bavele nje abazi ukuthi kufanele bagqoke kahle kanjani amakhuphlink. Futhi konke ngoba ku-wardrobe yamadoda anjalo azikho nje amahembe azofanele afane nawo. Uma uthenga amamodeli ngaso sonke isikhathi, lapho kukhona izinkinobho emikhanda, khona-ke, ama-cufflink awakulungele wona.
Le ngxenye idlala indima enkulu ekubunjweni kwesithombe. Futhi, ngaphambi kokuba uqonde ukuthi ungagqoka kanjani i-cufflink, kubalulekile ukuthola indlela yokuzikhethela kahle. Ngokungaqondile, akufanele kube eshibhile. Abantu abanolwazi bayobona lokhu ngokuqinisekile. Uzobukeka unengqondo ekudleni kwebhizinisi ezinhlanganisweni zezintambo eziziqhenya ngokweqile. Kuyafaneleka ukuwaqoqa ngokuvumelana nalesi senzakalo. Esikhathini esizayo, izitolo ezenziwe ngemfashini zithengiswa kubathengi ngezesekeli ezihlukahlukene zamadoda. Isiliva, igolide, ngamatshe, ne-anagrams, ehlukile ngesimo nesitayela sokusebenza - njengama-cufflink ukugqoka, uma kuningi kangangokuthi ngezinye izikhathi akunakwenzeka ukukhetha. Yenza ukuthengwa kuphela ngemva kokuba unezingubo ekhabethe lakho elenzelwe ukuthwala izesekeli ezinjalo. Ama-cufflinks kufanele afaneleke sonke isambatho sezingubo.
Kumele sikhumbule ukuthi lezi "ziqubu" zifaneleke kakhulu ngezingubo ezine-cuff kabili. Kumele iqhubekele ngaphansi kwesigqoko sejaji ngamamentimitha amathathu kuphela, hhayi ngaphezulu. Ngakho-ke, i-cufflink izobonakala kwabanye kuphela lapho umninimzi wabo ephakamisa kancane noma egoba isandla sakhe. Futhi kulokhu kukhona charm ethile.
Ukugqoka kanjani i-cufflink? Okokuqala, khumbula ukuthi bahlale bekhethiwe emshini owodwa wombala, hhayi kuphela ngekhati kanye ne-tie, kodwa futhi neminwe yesikhumba, imininingwane yensimbi yesikhwama noma isikhwama somshini, isibani, ikhadi lebhizinisi nokunye. Uma uthatha isinqumo sokuthenga amakhofi, kufanelekile ukukhumbula ukuthi yiziphi amahora ozigqoka.
Amaqembu okwesabisa angakwazi futhi ukubhekana nesifo sokuthi ama-cufflink afake kanjani. Emva kwakho konke, badala imikhiqizo ngesimo sezilwane, izimoto, izingcezu ze-chess, amabhilidi e-billiard, amadayisi njalonjalo. Futhi i-cufflink ne-initials yomnikazi izobukeka okungaphezu kokukhethekile.
Uma unquma ukuba ngumnikazi ojabulisayo we-cufflinks, ungaziphili injabulo yokuthenga izinketho eziningana ngesikhathi esisodwa. Bese-ke bangakhethwa ngokuya kwenkambiso yansuku zonke, isimo sengqondo, umqondo ozokwenzela nokunye okunye.
Dala ikhabethe capsule: 7 Easy Izinyathelo
Hoodies Wezingane noma ngabe isiphi isikhathi
Iminyaka engu-35 - ukuthi lomshado, yini ukunikeza? Yiziphi emasikweni lomshado oneminyaka engu-35?
Indlela yokwenza umgexo pasta ngezandla zabo?
Uhlelo i-division of angaphandle kanzima ku-Windows: Sibutsetelo engcono
Lolo ebusika ... Yini ukwenza lokhu ngempelasonto?